Ubuholi be-ANC bonke buyobhonga emswaneni kwaMadikizela-Mandela | News24
Ubuholi be-ANC bonke buyobhonga emswaneni kwaMadikizela-Mandela
eGoli - Wonke amalungu e-NEC angu-80 azohambela ekhaya likaMadikizela-Mandela eyobhonga emswaneni ngoLwesine, kusho iPhini likaMengameli wezwe uDavid Mabuza.
UMabuza ubeyingxenye yezicukuthwane ezihambele ekhaya lale nqalabutho e-Orlando eSoweto ngoLwesithathu.
Njengabanye abaningi, uMabuza uncome amagalelo amahle kakhulu ale ndlovukazi ngezikhathi zobandlululo.
OLUNYE UDABA: 'UMadikizela-Mandela ubengumakoti wangempela'
UMabuza uthe amalungiselelo omngcwabo ahamba kahle kakhulu.
Umndeni wengqalabutho yomzabalazo esanda kukhothama uNkz Winnie Madikizela Mandela oseMbizana e-Eastern Cape esigodini saseMbhongweni lapho azalelwa khona usukubeke kwacaca ukuthi kabayizwa kahle eyesinqumo sokumngcwabela eGoli.